I-SimpleCleaner, yasimahla kangangexesha elilinganiselweyo kwivenkile ye-Mac App | Ndisuka mac
I-SimpleCleaner, yasimahla kangangexesha elilinganiselweyo kwivenkile yeMac App
I-SimpleCleaner sisicelo sokucoca iifayile ezingafunekiyo kunye nokuphinda iifayile ngokuthe ngqo kwi-Mac yethu. Kule meko usetyenziso oluthe ngqo kwivenkile yesicelo se-Apple, isimahla ixesha elilinganiselweyo. Esi sisicelo samagqala kwivenkile yesicelo seMac kwaye ukuba ungomnye wabasebenzisi abathanda ukuba nendawo enkulu kwiMac ngokususa iifayile eziphindiweyo okanye amaxwebhu, esi sicelo sinokuba nomdla ukwenza lo msebenzi.
Njengoko sihlala sisitsho, ezi ntlobo zezicelo zokucoca i-Mac yethu zisinceda kakhulu ngezihlandlo, kodwa ukuba okanye ukuzama ukuba nombutho omncinci kwii-hard drive kubalulekile ukuze singaphindi amaxwebhu okanye iifayile kwaye zinendawo efanelekileyo ikamva. Kwelinye icala, kusengqiqweni ukuba amaxesha ngamaxesha iifayile, amaxwebhu, imifanekiso kunye nezinye zinokuphindwa kwiidiski Kungenxa yoko le nto ukusetyenziswa kolu hlobo kulungile kuthi.
Ngokucacileyo kukho ezinye usetyenziso okanye izixhobo ezifanayo nesicelo seSimplaCleaner kwivenkile yeapp nangaphandle kwayo, kodwa kule meko singayifumana simahla. Ukusetyenziswa kunye nembonakalo yesicelo ilula kwaye iyasebenza ukwenza lo msebenzi, ngayo sinokufumana indawo ethe kratya kwiidrive zethu ngo:
Ukucoca i-cache kwizicelo
Cima iirekhodi kwizicelo
Ukucima idatha kwisikhangeli esingasebenziyo
Ukucinywa komxholo wokukhuphela kunye neefayile ezinkulu kune-100 MB
Zonke iimpinda kunye neposi yokukhuphela ifowulda yokucoca
Ngamafutshane, isicelo esinomdla okwangoku simahla kwiVenkile ye-Mac.
Umendo opheleleyo kwinqaku: Ndisuka mac » Iinkqubo zeMac » Mac App Store » I-SimpleCleaner, yasimahla kangangexesha elilinganiselweyo kwivenkile yeMac App
I-Apple ibonisa izicwangciso zayo zeVenkile yeApple kwiThala leencwadi laseWashington iCarnegie
Yiminyaka eli-19 ukusukela oko iMac yazalwa